Izindlu Zethu Zokubonisa - Isibonisi Esilula Esiningi - Isoftware Yezimpawu Zedijithali
Vakashela izindlu zethu zokubukisa ukuze ubone i-Easy Multi Display isebenza.
IZIKOLELO ZETHU NEZIKOLE ZETHU
Sinamakhasimende kulo lonke elaseYurophu, futhi siyaziqhenya ngokusekelwa kwezinga lomhlaba kanye nensizakalo yamakhasimende. Ukunakekelwa kwamakhasimende ethu okukhethekile kuye kwaholela ekutheni sidale Amagumbi okubukisa ama-2 lapho sinikezela khona amademo nokuqeqeshwa.
Umbukiso wethu eBrussels usuvulekile manje!
Embukisweni wethu omusha osanda kwenziwa kabusha eBrussels, ungajoyina nathi ukuhlola amakhono we-Easy Multi Display.
Thola imibuzo yakho iphendulwe ngomunye wabasebenzi bethu abazinikele futhi uthole uqeqesho ku-Easy Multi Display ukuze ukwazi ukuthola isisombululo sakho sezimpawu zobuchwepheshe futhi ungasebenzi ngasiphi isikhathi.
Thumela kusuka ku-RICOH THETA. # theta360fr - Image Spherical - RICOH THETA
Igumbi lethu lokubonisa eMontpellier, eningizimu yeFrance
Sisebenza kanzima ekwakheni igumbi lokubonisa eMontpellier lapho uzokwazi khona ukusijoyina ukuze uvivinye i-Easy Multi Display.
Yenza imibuzo yakho iphendulwe ngomunye wabasebenzi bethu abazinikele futhi uthole ukuzinikezela, ukuqeqeshwa okukodwa noma ukuqeqeshwa kwethimba ngokuthi ungayisebenzisa kanjani i-Easy Multi Display ukuze ukwazi ukuthola isixazululo sakho sezimpawu zedijithali ngokushesha.
Ufuna ukubona i-Easy Multi Display isebenza? Ngakho-ke Xhumana nathi ukuhlela idemo yamahhala, noma ukuthola ukuqeqeshwa eqenjini lethu lobuchwepheshe. Ithimba lethu lizojabula ukukwemukela emagcekeni ethu ukukwenza uthole isoftware yethu.